Pakistan Mugwagwa Wekutakura-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Imba>Our Services>International Road Transport>Pakistan Mugwagwa Wekutakura
Sohologistics, inogara yakanamatira kutora manejimendi nzira dze "Kugadziridza nekuvandudza, Dhivhisheni uye Kunatsiridza, zvichisanganisirwa nemakore ekunaya kweruzivo rwekutakura mumigwagwa yekuChina uye yechitatu-bato mugwagwa mukuru wekufambisa zviitiko, zvichiteerana nekufambisa kwekufamba kweSilk Road neEurasian kondinendi bhiriji rezvehupfumi bhanhire, vachishingairira kupindura kuChina "Rimwe Bhandi Uye Imwe Nzira" chirongwa chinogadzirisa zvakanaka kuronga kwemakambani kuronga uye kutanga kupa sevhisi nyowani yekufambisa kwemigwagwa yepasi rose kuenda kuPakistan.
Sohologistics inotakura zvinhu zvako muChina wobva waendesa kuchiteshi chekashgar muXinjiang kuenda kuChina-Pakistan hushamwari Highway (KKH) (iyo Karakoram Highway, inonzi KKH kana Pamir Highway), kuburikidza nekhunjerab pass pamuganhu weChina-Pakistan kumaodzanyemba. uye svika kuIslamabad, guta guru rePakistan kuti rigoverwe kune vese muPakistan mushure mekupedza kubvumidzwa kwetsika muSost port muPakistan.
Ndeapi mhando yezvinhu akakodzera kune dzimwe nyika nzira yekufambisa kuenda kuPakistan?
Yezvinhu zviri mukati me2.5 metres muhupamhi uye gumi nemamita pakureba. Kunze kwezvo, nekuda kwesimba remamiriro ekunze uye jogirafi, iyo yakavhurika nguva yeChina-Pakistan yekufambisa migwagwa yepasi rose kubva muna Kubvumbi kusvika Mbudzi gore rega.
Maitiro ekuitisa tsika kuzivisa, kuendesa kwetsika uye kubvumidzwa kwetsika kwenzira dzekunze dzemigwagwa kuenda kuPakistan
A. Mugwagwa wekufambisa kuenda kuPakistani kunozadzisa chirevo chekutumira kunze kwenyika maererano neruzivo rwakaringana rwekunze mota dzekufambisa uye tsika dzemuno mushure mekurodha pamotokari dzekunze muSuperised Warehouse.
B. Kufamba kwekufambisa kwemugwagwa kuenda kuPakistan kunoziviswa munyika dziri munzira
C.International mugwagwa wekufambisa kuenda kuPakistan unogona kuziviswa pamuganhu chiteshi chetsika clearance kana panzvimbo yeprojekiti.
Ndeipi incoterm inoshandiswa kune epasi rose mugwagwa wekufambisa kuenda kuPakistan?